D Duplicate na tsy duplicate? & Ndash; Expert Of Semalt, Fantatr'i Natalia Khachaturyan Ny Valiny Tsara!
D Duplicate na tsy duplicate? - Expert Of Semalt, Fantatr'i Natalia Khachaturyan Ny Valiny Tsara!
Nipoitra tsikombakomba teo amin'ireo manam-pahaizana SEO nandritra ny fotoana maharitra ny votoaty duplicate. Ny fahatsapana fa ny bugbear SEO dia tsy maintsy esorina raha tsy izany dia mety hitarika ny tranonkala hoesorina amin'ny toerany. Na dia misy sazy maimaim-poana aza ny fanontana dia misy fomba iray ahafahan'i Google mampiasa algorithm omenao mba ahazoana antoka fa tsy misy fiantraikany amin'ny pejy hafa ao amin'ny tranokalanao ny dika mitovy.
Milaza ny tetikady momba ny Content Semalt , Natalia Khachaturyan, fa tsy mamaritra dika mitovy ny votoaty nomen'i Google fa misy pejy hafa miaraka amin'ny votoaty mitovy izay malaza kokoa ao amin'ilay tranonkala. Raha manana pejy marobe miaraka amin'ny votoatiny ny tranokalanao, Google dia hanana fotoana sarotra miezaka misafidy ny dikan-teny marina - patek philippe nautilus 5980 replica. Haneho fotsiny ny dikan-teny iray amin'ny votoaty amin'ny valin'ny fikarohana, ary ireo dikan-teny hafa dia miafina. Maro ny manam-pahaizana SEO no mahita fa sazy izany. Zavatra telo no mitranga amin'ny toe-javatra toy izao:
Google tsy mamaritra ny pejy;
Tsy latsaky ny lanjan'io pejy io;
Ny tranonkala dia hajaina ho loharanom-pahamendrehana azo antoka sy votoaty tokana;
Izany dia manome ny antony mahatonga ny mpamorona webmasters ho toy ny sazy, saingy ilaina ny mahafantatra fa tsy ny fitadiavana fikarohana rehetra no mila miatrika. Misy tetika maro ampiasaina amin'ny votoaty dika mitovy, fa tsy ny rehetra no mahaliana indrindra ny mpiserasera sy ny mpikaroka.
Nisy tambajotra maro nampiasa tranonkala manokana mba hanapariahana votoaty miaraka amin'ny fanantenana fa mety haka fitiliana fikarohana izany. Tsy natao hampidiran-danja ny tranonkala izy ireo, ary amin'ny ankapobeny dia tsy mampisy dikany. Mila mandinika ny habetsaky ny votoaty ianao mba hahatongavana amin'ny drafitra hahafantarana hoe aiza no nalehan'ny milina fikarohana. Misy karazana doka maro karazana misy:
Amin'ny maha-tompona tranonkala anao, dia mety hahita votoaty sarobidy ao amin'ny tranokala hafa ianao..Rehefa avy namaky ny votoaty ianao, dia tsapanao fa te hizara azy amin'ny tranokalanao ianao. Na izany aza, tsy hevitra tsara izany, satria tsy ny votoatiny voalohany ary tsy dia sarobidy loatra. Amin'ny farany, ny fampiharana toy izany dia mety hitarika amin'ny fidinana ankapobeny ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkalanao.
Ny fomba tsara indrindra hanamafisana io olana io dia mampiasa marika kanônika amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ampio izy hampiseho fa ny votoaty voalohany dia amin'ny tranonkala hafa. Ny fitaovana fitadiavana dia hahafantatra avy eo fa ny votoaty dia vita kopia ary eo am-pelatananao izany.
Mila mahatsapa ianao fa amin'ity tranga ity dia ny lanjan'ny rohy dia hiditra amin'ny loharanon'ny votoaty. Amin'izany fomba izany, raha mampiasa rohy maromaro ianao, dia hitazona kely ny ampahan'ny lanjany. Raha tia ny votoatiny ny habetsahan'ny fotoana hitsidihany azy dia mety hihoatra ny fihenan'ny famaranana pejy.
Fampahalalana momba ny vokatra duplicate
Mitondrà toe-javatra izay ahafahanao manana orinasa iray izay mahazo vokatra avy amin'ny mpamokatra samihafa. Ilaina ny mahazo fampahalalana toy ny famaritana, ny mari-pamantarana, ary ny sary mba hametrahana azy ao amin'ny tranokalanao. Hanome ny fampahalalana marina omen'ny mpanamboatra ianao
Ahoana no hamahana azy: tsy maintsy mametraka ny tranokalanao manokana ianao. Ilainao ny manoratra ny filazalazana sy mamoaka sary manokana ho an'ny vokatrao, izay azonao atao amin'ny tranokala hafa toy ny vokatra vokatra.
Disadisa: ny tetikady dia mety handany fotoana be rehefa tsy maintsy manangona fampahalalana ilaina mba hamaritana ny vokatra.
Lisitry ny vokatra marika
Izany dia miteraka adiresy URL na raha misy pejy maromaro mitantara ny vokatra fototra toy izany.
Ahoana no fomba hamahana ilay olana: ohatra, raha mifandamina zavatra dimy ianao ary mamorona URL vaovao isaky ny mamaritra ilay singa mety amin'ny habeny sy ny vidiny fa tsy baiko alphabetika ianao, dia ho vitsy kokoa ny pejy misy ny votoatiny amin'ny adiresy samihafa.
Mety hampiady saina ny votoaty dika mitovy. Raha fantatrao tsara ilay olana dia hanampy anao hamaha ny olana izany alohan'ny hanapahany hevitra. Ianao dia afaka manomana drafitra momba ny fomba azo antoka fa ny lanjan'ny mandeha amin'ny duplication dia tsy misy fiantraikany manan-danja eo amin'ny toerana misy anao. Ny vahaolana amin'ity olana ity dia mety handany fotoana, nefa mendrika ny fotoana ahafahany mamorona ROI ambony amin'ny fitsidihana rehetra ao amin'ny tranokalanao.